Himalaya Dainik » के हो कपाल प्रत्यारोपण, के यसको साइड इफेक्ट छ ?
२६ कार्तिक २०७५ |
के हो कपाल प्रत्यारोपण, के यसको साइड इफेक्ट छ ?
जसरी एउटा बिरुवालाई उखालेर अर्को खाली स्थानमा रोपिन्छ र त्यो बिरुवा विस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ । उक्त बिरुवालाई काँटछाँट अनि स्याहार सुसार गर्दै गइयो भने राम्रो हुन्छ ।’ त्यही प्रक्रिया हो कपाल को पनि ।
निधार र तालुको कपाल धेरै झर्छ । यो हर्मोनल डिफेक्टले गर्दा हुने हो । कपाल प्रत्यारोपण गर्न चाहने व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको रोग छैन र ऊ स्वस्थ्य अवस्थामा छ भने तुरुन्तै प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
कपाल प्रत्यारोपण दुई प्रकारको हुन्छ । एक आफ्नै शरीरको कपाल रोप्ने र अर्को फाइबरको प्रयोग । फाइबर एक आर्टिफिसियल कपाल भएकाले त्यति राम्रो मानिदैन ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा आफ्नै शरीरको कहिल्यै नझर्ने कपाललाई निकालेर रोपिने भएकाले यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । रोपेको कपाल विल्कुलै ओरिजिनल कपाल हो । मजाले आफूलाई मन पर्ने साइजमा काँट छाट गर्न सकिन्छ । कपाल र शरीर स्वस्थ्य छ भने यो लाइफ टाइम रहन्छ ।
प्रकाशित मिति २६ कार्तिक २०७५, सोमबार ०९:०९